Tokko Hin Tollee Budaan Lakkuu Dhaltee |
Home Afaan Oromoo Tokko Hin Tollee Budaan Lakkuu Dhaltee
Damee Boruu tin, Adoolessa 21, 2018
OPDOn jalqabaa kaasee humna halgaan ijaaramuu fi walaba ijaarsaa dhabuu irraa kan ka’e Uummata Oromoo fi warra ijaaree ittiin deemu biratti kabajaa gahaa hin arganne. Warri ijaares akkuma meeshaa olii fi gad oofanii bakka dhimaa baaftii itti fakkaate kaa’aa turan. Keessattu harka Malasaa Zenawwii itti hedduu salphachaa turuun OPDO waan dagatamu miti. Hooggantoonni OPDO warri wal jalaa booda itti darban ergaa TPLF hojjechuu malee kan mataa isaaniin yaadanii akka ijaarsatti uummata isaaniif hojjetan yoo jiraate baayyee xiqqaa dha.
Utuu isaan Oromiyaa nutu bulchaaa jira jedhanii qabeenyi Oromoo yaroo saamamee dhumu maaliif biyyi keenya saamamuu qaba jedhanii gaafachuu irra afaan kaa’aa fudhatanii afaan qabachuu filatan. Saamicha deemaa jiru dhaabbuuf aangoo fi humna akka hin qabne beekamaa dha. Karaa biraa mirgi Uummata Oromoo yaroo dhiitamu dhiisaa jechuuf onnee hin arganne. Yoo dubbatan waan hojii irraa ar’amanii fi mana hidhaa seenaniif akka nama hin agarree gama ilaalanii darbu. Ilmaan Oromoo tumuu, hidhuu fi ajjeessuu isaanitu diina dura deemee raawwachaa ture . Har’a illee akkuma durii sana itti jiru. TPLF diina Uumata Oromoo keessa isa duraa waan taateef beekaa OPDF fi Uummatni Oromoo dhugdaa fi garaa akka tahan gochaa turte. Sababa kanaaf Uummatni Oromoo OPDO ijaarsa kooti jedhee yaroo mararsiifatuu fi ammatu argaa hin jiru. Ijaarsi OPDO illee dhaabba ayyaan ilaallatoota fi namootni halagaa Afaan Oromoo beekaniin guutamtee Uummata Oromoo tajaajiluu irraa akka of tajaajilaan carraa guddaa laateef jirti.
Ilmaan Oromoo uummata isaaniif quuqaman kan basaasuu, kan addamsu, kan hiisisuu fi ajjeessu adda duraan OPDO dha. TPLF yoo baayyate ajajaa laatiif. Yoo obbolaa isaanii qabanii geessan immoo fanniftee tumtee, guggubdee, dhidhiitee oduu harkaa baafachuuf hammeenya ilmaan Oromoo irratti kan raawwatu TPLF. TPLF hammeenya kana hundaa kan raawwattu ilmaan Oromoo sammuu sodaa akka qabatanii fi bara baraan sodaan akka jiraatan gochuuf.
Injifannoon Qabsoo Bilisummaa Uummata Ormoo inni duraa Sodaa mo’achuu dha. Uummatni Oromoo gaafa soda hin injifatee qawwee malee TPLF of irraa darbe. Achi ga’uuf garuu dhiiga isaa akka lolaa ganaa dhangalaasee jira. Gaafa injifannoon argamu OPDOn diina Uummata Oromoo kan taate TPLF ijaarattee of harkaa qabdu qabsoo uummataa harkaa butanii kan mataa isaanii godhachaa jiru. Maqaa jijjirama fidaa jirra jedhuun TPLF gorroo dhuuba dhoksaanii har’as haammenya kaleessa ture itti fufaa jiru. Hojiin isaanii inni duraa waan deemaa jiru dhoksuuf jecha haala wal marqaa, mataan isaa fi milli isaa hin beekamne uumuudhaan uummata burjaajessuu dha. Jireenya koo keessatti takkaa jijjirama kaayyoo fi akkeeka hin qabne, tarsiimoo fi tooftaa hin barbaannee kan jechaa fi sagalee mana farsoon deemu yaroo duraaf arguu fi dhaga’uu kooti. Jijjiramni kun gara kam akka deemaa jiru nama baayyee ifaa miti.
“Tokko hin tollee budaan lakkuu dhaltee”, jedhan. TPLFf meeshaa taatee OPDOn dhumaatii Uummata Oromoof itti gaafatama qabdu utuu hin raawwatiin har’a immoo dabartee qabsoo bilisummaa Uummata Oromoo danquuf oftuultota Amharaa uummata keenya irratti ijaaruun hojii amajaajii akka taha dhokataa miti. Ajajan Waraana Muumicha Ministeerati haa jedhamu malee har’a waraana Uummata Oromoo irratti adda duraan kan oofaa jiru Jeneraaloota TPLF jedhee uummatni iyyaa jira. Yoo dhugaa ajajaan waraana Itoophiyaa Muumicha Ministeeraa tahe kan uummata Oromoo fixaa jiru OPDO akka tahe Uummatni Oromoo adda baafatee beekuu qaba. Yoo waraana kan oofaa jiru akka uummatni himatu Jeneraaloota TPLF OPDOn hantuuta hanfaaroo Leencaa mataa irra keewwatee sirbaa jirtu malee aangoo dhugaa akka hin qabne ragaa dha.
Waraanni TPLF Uummata Oromoo irratti oofaa jirtu utuu hin raawwatiin maaliif oftultota Habashaa Uummata Oromoo irratti kaasaanii ijaaruun akka barbaachisa tahe namaaf hin galu. Hooggantoonni OPDO humna itti hirkatan yoo barbaadan humna Uummata Oromoo bakka har’a jiran kanaan isaan gahe kan caalu argachuu tasa hin danda’an. Utuu Uummata Oromoo itti hirkatanii jiraatanii bubbeen kamuu isaan raasuu hin danda’u. Karaa fugisoo, karaa galma hin qabne akka filatan kan isaan godhe fira isaanii utuu taane diina isaanii akka tahe hubachuu qabu.
Aarsaa guddaa nu barbaada malee bilisummaan dhufaa jira.Uummatni keenya qabsoo hadhaa’aa yaroo dheeraaf of qopheessuun dirqama. Diinni keenya lameen TPLF fi oftultonni Amhaara nutti wal furanii nu dadhabsiisuuf deemu. Yoo hammatee immoo wal tahanii uummata keenya cabsuu irratti boba’uun ni mala. Qabeenya Oromiyaa malee lamaanuu jiraachuu waan hin dandeenyeef.
Waan tahuuf deemaa jiru haala biyya komunsitoota keessatti bara kudha sagalii fi sadetamman keessa tahaa ture fakkaata. Mikaa’el Gorbaachoov dimookraasii fiduu walitti dhufeenya sooveeti (USSR) dhiigee nagaan lola malee biyyoota bilisa tahan kudha shan akka uumamni godhee jira. Yugoslaaviyaan biyya uummatni adda adda jaha tahanii naannoon of bulchaa mootummaa gidduu galeessa tokko qabaachaa turan turte. Akka Amhaara biyya Impaayeera Itoophiyaa kana Uummatni Sarbiyaa jedhamu baayyee olaantuumman kan itti dhagamu dha. Biyya Yugolaaviyaa kanaaf itti gaafatama guddaa kan qaban waan isaanitti fakkaatuuf eenyu iyyuu akka bilisa bahu hin fedhan. Sababa Kanaan waraana naannoo sanatti fidaniin namni baayyeen dhumuu danda’ee jira. Dhuma irratti biyyi lafaa isaanitti dirmata humna Sarbiyaa cabsuun akka biyyoon jahanuu biyya bilisummaa qabu tahanii godhamee jira. Isaan keessa Sarbiyaan illee biyya tokko taatee jirti.
Akkuma Sarbiyaa sana Amhaarri tokkummaa Itoophiyaa eeguuf waan dirqama qabu of fakkeesa. Har’a OPDOn waan isaan wajjin sirbaa jirtuuf seeraa federaalaa keessaa “article 39” badee, afaan tokko, alaabaa tokko fi biyya tokko qabaachuu qabna jedhanii ifatti dhaadachaa jiru. Beekaan Oromoo, Dr. Makuriya Bulchaa waa’ee kana “Article 39, Oromo Nationalism, Abyssinian Exceptionalism Expectations Raised By Dr.Abiy Ahmed’s Premiership- part I & II”, kan barreesse namnuu utuu dubbisee natti tola. “Article 39” kun haphee Impaayeera Itoophiyaa walitti hidhee jiru waan taheef yoo sun haqame Imapaaerri Itophiyyaa akka hin jiraane ragaa dhiyyeesse jira.
Ani illee akka namoota tokko tokko mul’ata qaba jedhee hin waakkadhu. Garuu muxxannoo, hubannaa fi xinxala loojikii (Logical Analysis ) qabuun kan natti argaama jiru haalli fakkeenyi yugoslaaviyaa keessatti tahee akka uummata keenyatti dhufaa jiru dha. Gaafa Impaaerri Itoophiyaa caccabu Oromiyaan saatii digdamii afur keessatti bilisa bahuu dandeessi. Rakkinni keenya guddaan gaafa Impaayerri Itoophiyaa caccabu Oromiyaan waan sabaa fi sab lamii hedduun marsamtee jirtuuf tasgabii fi nageenya naannoo keenyatti qabaachuuf amma kaafnee irratti hojjechuu qabna.Waraana caala kan nu barbaachisu hojii ijaarsaa fi siyaasa akka tahe adda baafne hubachuun Barbaachisaa dha. Hojiin Qeerroo keenya amma dachaa dachaan babalchuu qaba. Uummatoota naanoo keenya jiran hundaaf humna Qeerroo ijaaruu fi wal quunnamtii jabaa qabaachuun haalan barbaachisaa dha. Warri aangoo irra jiran ayyaan ilaallatoota waan tahaniif gara humni jabaate deemu malee dhimmaa uummata isaanii fixaan baasuuf of hin kenanan. Kan fedhii uummataa bakkaan gahuu of kennu qeerroo fo qarree uummata keessaa maddan akka tahe adda baafnee beekuu qabna. ILkee TPLF isa dhumaa of irraa buqqisuuf qabsoo keenya daran fininsaa, humna Amhaara nu liqimsuuf afaan banaa jiru of irraa facisaa, qabsoon keenya gara uummatoota ollaa Oromiyaati babal’ate akka fira horachaa deemnu gochuun dirqama tokko tokko keenyaa ti.
Previous articleSBO Sagalee Bilisummaa Oromoo, Adoolessa 22, 2018
Next articleOromia keessa kan deemaa jiruu – Adoolessa 22, 2018
Olansa July 22, 2018 At 12:36 pm
Harreen Looniin galtii jennaan, ofinu hingaltuu Looniin galti jedhe Oromoon yoummuu mammaku. Biyyatti Itophia jedhamtu kana kessatti, mootumman ishee yero sad’i fonqolchamera. Yero sadanuu qodni hummatni Oromo kana kessatti qabaata ture ol’aanaa dha. Garuu, bu’aan Hummani kun jijjirama sana irraa argate caalaa gaagama isa irra gahetu caalaa.
Dargiin gaafa dhufu : “Ethiopia First” jedhe calqabe. Isa qofaa miti, ” Yaala minim dem, Inkenua yiwdem; beqenna Menfes, Itophia Tikdem” jedhe. Mootumaan sun dhiiga malee, guddina hinfinnee. Waggaa 17 hummata dhiigsaa ture. Ilmaan Nafxanyaa tarkanfattota ta’anii as-bahan. Mootummaan Dargii yommuu kufaatii jala gahe, kan Aangorra ture, Ilmaan habasha qofa ta’e; yeroo Tokko Gojjaamee, yero bira immo Gondaree. Dhuma irratti yero biyyittin sardama kessa seentu, motumman dargii reeqiftu, Mangistuun aango gdhisee sokke. Eenytti kenne seetan aangicha, Tesfaye Dinqaa fi Tesfaye Gebre-kidan. Jarreen kun Oromoo wanta ta’anif biyyatti tasgabessu, badii irra nudandamachisu jedhanii yaadaniti. Garuu Wayyanee fi Shabiyan hinmokfamne kana. Hummanti oromoos akkasuma. Kufaattin Dargii dhugome. “Inkenwa yiwdem” inni jedhu farrota Impayerattii haadhabamsifnu kan jedhu dha. Farra jedhanii kan kayaan warra mirga Lammii isaniiti falmii godhani dha. Kana kessatti ada-durumman kan argamu Oromummaa, Tigrumaa, Sidaamummaa, Sumalummaa, Afaarummaa fi kkf dha. Hardhas akkuma kalessaa, Motummaan Dr. Abiyi “Itophian Haarursitu”, “Jaalaa”, “Ida’amuu” jedha akkuma bara dargii sana lallaba isaa calqabee jira. Kan harka lafa jalaan hojjatamu garuu, fallaa isati. Oromummaa irratti duulamaa jira.
Yaa Oromoo, dubbii Lammaa Magarsaa fi Abiyi “Arraba Farda” tin nu’arraban kana kessatti qalbeffadha ilaalaa. Namni akka kotti lafa baddaa, biyya Fardeenii itti dhalate, akkatti itti Sangaa Fardaa goodaa ykn Diree dha qabanii Luugama itti kayanii yaabbatan beektuu? akkana dubbiin: Garbuu gondotti guutanii laga ykn goodaa bakkee Fardi dheedu dhaqu. garbuu itti soraa ykn sac’aa sagaleen fardicha waamu. Fardi garbuu sorrama. Garbutti garaa hinjabaatu. Garbicha yommu argu fiigee dhufa. garbuu gundon jala kaa’u. Hamma inni garbuu nyaatee fixutti, Takaallaa mormatti, faxorraa fuunynitti kayyantu. Achiin booda fardicha harkisani itti fe’atanii yaabbatu. Yaa hummata oromoo, of-hindagatina OPDO amantani. Ishiin halkan tokkotti jijjirramti. Falliii nuti qabnu Oromummaa fi Oromiyaa irratti cichuu dha. Oromummatu injifannoo amma argame kanaan nugale, dhabamuu irraa nubaraare. Karaa sirri irra hin-maqnuu yoo marattuu taane, malee.